हामीलाई पनि स्वतन्त्र रहन देउ
कृपया, हामीलाई पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम रहन देउ । नेपालीले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा रगत बगाए, १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको हो । भारतको स्वतन्त्रताको सधैं नेपाल र नेपालीले सम्मान गर्दै आएका छन् । नेपाली सधैं स्वतन्त्र रह्यो, नेपालको स्वतन्त्रतामा भारतलाई किन डाहा, किन निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेछ, नेपाल स्वतन्त्र रहँदा भारतलाई लाभ नै छ, नोक्सानी छैन । यो बुझेर पनि भारत नेपालमाथि खुनी नङ्ग्राले चिथोरिरहन्छ । अव जनसंख्याको हतियारले नेपालमाथि कब्जा गर्ने रणनीति बनाइरहेको देखिन्छ । भारतलाई ज्ञात होस्, बागमतीमा रगत बग्नु भनेको भारतको गंगा अपवित्र हुनु हो । भारत किन आत्मघात गरिरहेको हो ?
भारतले बिभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा तरक्की गर्दै गइरहेको छ ।... आर्थिक, सामरिक, औद्योगिक र सूचना प्रविधिका क्षेत्रहरुमा भएको प्रगति त वास्तवमा काबिले तारिफ छ । भारत दिन दुई गुणा, रात चौगुणाका दरले अघि बढ्दै जावोस्, भारत र भारतीय जनता सदासर्वदा खुशी र सुखी होउन् । एक छिमेकीको नाताले हामी नेपालीले यस्तो कामना गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । हाम्रो यो कर्तव्य पूरा गर्ने पवित्र शैलीर्ला कमजोरी ठानेर भारत नेपालमाथि खुनी पञ्जा किन घुसार्छ ?
भारतले बुझ्नुपर्छ– नेपाल भारतको फोहर फाल्ने कन्टेनर होइन । नेपाल सानो बजार हो भारतका लागि तर भारतले नेपालमाथि शोषणका अनेकन उपायहरु गरिरहेको छ । खुला सत्य हो– नेपाल र नेपालीको दुरावस्थाको मु्ख्य जिम्मेवार भारत नै हो । आज हामी सक्षम हुँदाहुँदै पनि हामीलाई भारतनिर्भर बनाइएको छ । हुन त कमजोरी हामीमा पनि छ । हाम्रा कथित नेताहरु आफ्ना जनता, कार्यकर्ता र आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, नीतिनियम र निर्णय भन्दा भारतीय नेताकै सामु लम्पसार पर्छन् । १२ बुँदे सम्झौता के गरे, दिल्लीले नेपाली राजनीतिलाई भातीकरण गरिदियो । नेपाली नेताहरु यो भारतीय लाक्षागृहबाट निस्कन सकिरहेका छैनन् ।
महत्वपूर्ण सवाल हो– भारतको नेपाल नीति चैं कस्तो छ त ? नेपालको तराईमा अहिले देखिएका सशस्त्र समूहदेखि लिएर हिजो अवैध भनिएका माओवादीहरु पनि भारतबाटै पालितपोषित नहुन् । हिजोका रामराजाप्रसादसिंहदेखि लिएर आजका नागराजहरु, राजपामात्र होइन, सिंगो सत्ताधारी र प्रतिपक्षीसम्म सबैको आधार दिल्ली नै हो । आज नक्सलवादबाट औधी पीडित भारतले हिजो (०६२–०६३) त्यस्तैखाले नेपाली नक्सलवादलाई च्यापेर नेपाल र नेपालीको आधार स्तम्भ हिन्दुराष्ट्र र शाहबंशीय राजतन्त्रलाई समाप्त पारेको होकि होइन ? आज भारत स्वयम् नक्सलीहरुको समस्या झेलिरहेको छ, सिसाको घरमा बस्नेले ढुङ्गा हान्नु हुन्न भनेको यही हो ।
भारतले अव निर्णय गर्नुपर्छ, १८०८० किलोमिटर खुला सिमाना किन राख्ने ? हो, भारतको अति जनसंख्या नेपालतिर धकेल्न र नेपाललाई फिजी बनाउन सकिन्छ भन्ने दुषित भावना होला । नेपाल धर्मभूमि हो, नेपाललाई दुःख दिदा अदृश्य शक्तिपनि छ, त्यो शक्तिको कोपबाट भारतले बच्न मुस्किलै होला । त्यसमाथि नेपालीहरुको राष्ट्रिय भावना यति प्रवल छ कि त्यो भावना उर्लियो भने त्यसले आँखा देख्दैन ।
यसकारण भारतले खुला सीमा बन्द गरेर नियमन गर्नैपर्छ र यसका लागि नेपाली नेताहरुमा पनि देशभक्तिको भावना जाग्नैपर्छ । ६० हजार बर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग मिचिसकेको भारतले नेपालका अरु भूभाग मिच्न सक्ला, नेपालीभित्रको राष्ट्रिय भावना मार्न सक्दैन । भारतलाई भन्नु यत्ति छ– तिमी स्वतन्त्र छौ, शुभकामना, हामीलाई पनि स्वतन्त्र बाँच्न देउ, दुःख नदेउ । अति भयो, अतिसार नगर ।